मलेसियाले बंगाली कामदार भित्राउन सुरु गर्यो, नेपाली लाई पनि चाडै ! - jagritikhabar.com
मलेसियाले बंगाली कामदार भित्राउन सुरु गर्यो, नेपाली लाई पनि चाडै !
गत डिसेम्बर १० मा मलेसियामा बंगलादेशी कामदार भर्ना गर्नका लागि बंगलादेशको प्रवासी कल्याण तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय र मलेसिया सरकारबीच सम्झौता गर्ने सहमति भयो । यो सहमति पछि अहिले बंगलादेशबाट मलेसियामा कामगार लैजाने तैयारी तिब्र भएको छ । र सोहि अनुसार कामदार मगौदै आएको छ ।
तर यस्तोमा नेपाली कामदारको लागि भने अझै कुनै प्रक्रिया वा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालीको पहिलो रोजाई मा रहेको मलेसिया रोजगार सपना जस्तै भएको छ ।
यसअघि सहमति भइसकेको वृक्षारोपण क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदार भर्ना खुला गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि विगत तीन वर्षदेखि नयाँ कामदार जान नपाएको नेपालमा पनि त्यसले एक प्रकारको खुशी ल्यायो । मलेसियाले विदेशी कामदारका लागि वृक्षारोपण, कृषि, उत्पादन, सेवा, खानी तथा उत्खनन्, निर्माण र घरेलु कामदारहरूका लागि भर्ना खुला हुने बताएको छ ।